KIIMIKADA "PERMYACHKA": BEERITAANKA IYO DARYEELKA, SHARAXAADA KALA DUWAN, SAWIR - KU'SAABSAN
Kiimikada "Permyachka": dabeecadaha, qarsoonaanta beerashada guuleysata
Beeraleydu waxay isku dayeysaa in ay hagaajiso meel kasta oo bilaash ah oo ku taal dhulka. Cawska loo yaqaan 'Pearlings' waa arrin mas'uulka ah oo culus, laakiin saameynta wanaagsan ee fikradda noocan oo kale ah waa wax aad u xun. Marka aad dooranayso noocyo kala duwan, bannaanka u bixiyaan fiiro leh dhalidda, sifooyinka miraha iyo hardiness jiilaalka ee geedka. In this article waxaan ka hadli doonaa noocyada kala duwan ee pear, taas oo inta badan ku qanciya dhammaan xuduudaha kor ku xusan.
Noocyada kala duwan ee "Permyachka" waxaa laga sameeyay Yekaterinburg oo ku yaal Saldhigga Xulista Xoolaha ee Sverdlovsk. Doorashadu waxay ku lug lahayd Professor Leonid Andrianovich Kotov. Kiimikada "Permyachka" waxaa si gaar ah loogu sameeyay beeraha Perm, Sverdlovsk, Kirov iyo Nizhny Novgorod. Kala duwan ayaa la helay iyadoo la marayo noocyada "Mawduuca" × "Elena" + "Cosmic".
Tilmaanta iyo sifooyinka kala duwan ee noocyada kala duwan
Sida laga soo xigtay sharaxaadda botanical, noocyo kala duwan oo pear "Permyachka" waxay leedahay caabiga u dhaxeeya sare. Abaabulidda waxaa loogu talagalay dhammaadka noocyada kala duwan ee beerto ee qaybta dhexe iyo waqooyiga ee Ruushka. Professor Kotov ayaa sheeganaysa in "Permyachka" oo leh daryeellada saxda ah ay awood u yeelan doonto inay midho u dhali karto xitaa Siberia.
Wax dheeraad ah ka baro beerista agrotechnik ee kala duwan ee pear Otradnenskaya, Lada, Fairy Tale, Veles, Rogneda, Nika, Talgar Beauty, Duchesha, Petrovskaya, Severyanka, Avgustovskaya dhar, Kokin, Bryansk Beauty, Thumbelina, Hera, Klapp's Favorite, Marble, Tabaruce.
Geedka noocan oo kale ah pear waxaa lagu gartaa sicirka koritaanka degdega ah, iyo haddii aysan soo saarin manjooyin wakhti go'an, waxay gaari kartaa meelo waaweyn (labadaba iyo dhererka taajka). Taajku waa ballaaran-giraan ah ama qaab muuqaal ah oo aad u dheer. Sanado badan oo caleemaha fruiting firfircoon kama hor istaagi karo khudradda miraha iyo jebin miisaankooda. Geedkii geedku waa mid awood badan oo adkaysi leh, oo aan waligeed ku dhicin cayayaanka.
Ma taqaanaa? Dhaqaatiirta Giriiggii hore waxay u adeegsadeen canbaar la yiraahdo lalabo iyo jirro murgacasho.
Geedkani wuxuu u baahan yahay lammaane ragga. Kuwa ugu wanaagsan waxay noqon doonaan noocyo kala duwan oo isdabajoog ah "Severyanka". Iyada oo daryeel ku haboon geedka dhexe ee Russia, waxaad ka qaadan kartaa ilaa 80 kg oo miro ah xilli kasta.
Miraha "Permyachka" noocyo kala duwan ayaa laga helaa (min 80 ilaa 150 g). Markaad u baahato ujeedo warshadeed, haddii aad raacdo farsamada habboon ee daryeelka, miraha waxay gaari karaan culeys 200 g ama in ka badan. Isteroberyo ayaa lagu daboolay dusha sare.
Midabka miro macquulsan yahay cagaar dhalaalaya, bislaaday - qorrax madow. Sida bannaanka qaar ka mid ah, dharbaaxo wacan oo isteroberi ah waxaa la arki karaa oo keliya inta lagu jiro xilliga xagaaga ee kulaylka qorraxda leh heerkulka hawada agagaarka +30 ° C, taas oo aad u dhif ah ee gobolka dhexe ee Russia.
Saxarka ah ee midhaha kala duwan ee this pear this waa mid aad u jilicsan iyo macaan, dhanaan waxaa si buuxda u maqan. Miraha qayb ka mid ah midabka cad, iyada oo aan lahayn unugyo dhagax ah, joogtada ah ee caanaha leh. Tijaabooyin badan ayaa ku qiimeyn doona nooca ismaamulkani 5 dhibcood 5-aad. Goynta ayaa dhacaysa bartamihii bishii Agoosto - horraantii Sebtembar. Haddii miraha laga saaro geedkii oo aan si cad u lahayn, markaa waxay "gaari doonaan" 3-4 maalmood (waa in lagu dhajiyaa qorraxda qorraxda).
First of dhan, Waxaan jeclaan lahaa in la ogaado in aad kaliya u baahan tahay si ay u iibsadaan geedo ka iibsan iibiyeyaasha aaminsan. Waxaa ugu wanaagsan in la booqdo xaruunta dhirta ballaaran ama xannaanada carruurta lagu taliyey. Iibsashada alaabta beerta ee suuqa, waxaad halis u gashaa iibinta dabiiciga ah ama xitaa noocyo kala duwan oo pear ah (iyo haddii aqoontaada beerta ay xun tahay, ka dibna baarayaasha xishoodka ayaa xataa xitaa ku iibin karaan dhir kale halkii pears).
Marka aad dooranaysid abuuritaanka, waxaa lagama maarmaan ah in la siiyo doorasho ah geedka sanadlaha ah, tan iyo laba sano jir ayaa leh nidaam xidhan oo awood leh, waana ay adkaan doontaa in la dego meerto noocaan oo kale ah. Sidoo kale fiiro gaar ah u leh goobta tallaalka. Waa in ay ahaataa heerka 5-15 cm oo qoorta ah. Geed khafiif ah oo geed leh ayaa haya wax yar oo qafiif ah, sababtoo ah saamiyadu waa la gooyaa, lafdhabarkuna wuxuu yaraaday xagal.
Waa muhiim! Ka hor inta beerto, geedo waxaa ugu wanaagsan in lagu hayo prikope.
Marka la baarayo abuurka, ku dhaji jilifka leh farahaaga. Haddii ay leedahay midab cagaaran iftiin, ka dibna wax beerto ayaa caafimaad leh oo ku habboon beeritaanka. Intaa waxaa dheer, fiiri nidaamka xididka ah ee warshad dhalinyaro ah: waa in ay ahaato lacag la'aan ah farsamoyin dhaawac iyo kallana. Ugu dambeyntii, waa in la ogaadaa in geedo waxaa la soo iibsaday jir jir iyo caleemaha - taas oo ah, iyada oo aan caleemo. Xaqiiqdu waxay tahay in caleemaha ay awoodaan in ay uumi baxaan qoyaan, markaa dhirta dhirta way qalalan kartaa.
Doorashada meel ku taal goobta
Wixii beeritaanka pears "Permyachka" waxaad u baahan tahay inaad doorato meel qorrax leh. Koonfur-bari ama qaybta bari ee goobta ayaa ku haboon. Diirad gaar ah waa in la bixiyaa heerka biyaha: waa inay ahaataa mid aan ka fogeyn 3 mitir. Xannuunada dhoobo cufan kuma habboona beerashada walxaha beerto, iyo haddii noocaan oo kale ah ciidda ay ku adkaato goobtaada, markaa waa in la badalaa lakabka lakabka-lakabka.
Sidoo kale waa in la ogaadaa Noocyo ku'saabsan "Permyachka" si fiican u maaha inaad beerato xiga buurta buurta. Xaqiiqda ah in dhirtaas ay saameeyeen cayayaanka iyo cudurrada isla sidaas darteed uma baahna inay fududeeyaan hawshooda. Warshadu waxay ka soo baxdaa sida caadiga ah ee loo yaqaan "acidity soil" (dooro carrada leh heerka caadiga ah ee pH).
Ceelasha dhulka waa in ay bilaabaan cunto karinta xilliga dayrta (haddii beeritaanka guga la tilmaamayo). Xayawaanku wuxuu u eg yahay in uu hoos u dhaco, iyo haddii aad qodo daloolka maalinta abuurista, seedlingu wuxuu aadi doonaa qoto dheer dhulka oo ay weheliso qoorta xagjirka ah, tani waa wax u nugul geedaha dhalinyarada. Haddii dayrta aad illowday inaad qodo dalool, ka dibna samee guga, laakiin aan ka yareyn todobaad ka hor bilowga beeritaanka.
Qoto dheer ee godadka waxay ku xiran tahay mugga nidaamka xidid ee seedling (celcelis ahaan, waxaad u baahan tahay inaad qodo si qoto dheer ah 50-70 cm). Mararka qaarkood waxaa fiican in la kordhiyo qoto dheer, tan iyo dhowr tobnaad oo bacaad ah ciidda bacrin ah ayaa lagu shubay hoose.
Sida ciidda bacrin ah, waxaad isticmaali kartaa isku dar ah ciid ah webiga, humus, peat iyo ciidda beerta. Potassium sulfate iyo superphosphate waa in sidoo kale lagu daraa ciidda. Bacriminta nitrogaraha waa mid aan loo baahnayn.
Haddii heerka dhulka hoose uu aad ugu dhow yahay dusha ciidda, dhalashada waa in la siiyaa nidaam dheellitiran. Sida qalab dhisme ah lebbaal jaban, qashin, iwm. Sidoo kale, ka hor intaan la beeri, ha iloobin inaad jajabiso miisaanka miisaanka oo dhan. Cilmi-baarista waxay hagaajin doontaa isbeddelka hawada nidaamka xididka, natiijada, dhirta ayaa kori doonta oo horumarin doonta dhaqso.
Ma taqaanaa? Isteroberi ayaa loo keenay Europe laga bilaabo Koonfurta Aasiya ilaa 3000 kun oo sano ka hor. Intaas ka hor, waxay si firfircoon uga soo shaqeeyeen Shiinaha, halkaas oo lagu tiriyay hadiyado rabbaani ah.
Haddii ceelka beerto ayaa la diyaariyaa, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad bilowdo diyaarinta seedling. Nidaamkani waa mid fudud: u diyaari isku darka peat, humus, ciidda beerta, daboolka dheeriga ah iyo qoryaha qoryaha, ku dar biyo yar (ilaa dhismaha mucous mass) oo geli xididdada yaryar ee xalka. Nidaamkan noocan oo kale ah ayaa dardar gelin doona horumarinta nidaamka xididka iyo ilaalinta seedling yar yar oo ka soo jeeda cayayaanka iyo cudurrada badan.
Habka farsamo ahaan saxda ah ee lagu beeri karey geedo geedis ah ayaa ku lug leh hawlaha talaabooyinka soo socda:
Qalabka beerta waa in la geliyo godadka si ay qoorta xagjirka ah u eegto heerka xadka u dhexeeya ciidda iyo hawada.
Marka xigta, seedling waxaa lagu daboolay dhulka 1/2 oo qoto dheer ee godadka, ciidda waa yar yahay.
Hadda Bacriminta adag oo lagu qasi jiray biyaha ayaa lagu dabaqayaa, ka dibna godadka ayaa la rusheeyey ilaa dhamaadka.
Dhabarka qoorta ah waxaad u baahan tahay inaad ka tagto niyad jab yar oo loogu talagalay waraabinta. Isla markiiba ka dib, seedling waxaa loo xidhxidhay saandal alwaax (taasi waxay keeneysaa koritaanka toosan ee geedka).
Next, seedling waxaa la waraabiyaa 20 litir oo biyo ah, ka dibna ciidda agagaarka jirku waa mulched. Sida mulch waxaad isticmaali kartaa sida balka, caws, irbadaha geed, peat, iwm.
Daryeelka ku haboon ee noocyo geed ah "Permyachka" ayaa kuu ogolaanaya inaad sannad walba soo ururiso tiro badan oo ah dalagyada, miraha kaas oo lagu dhajiyay dhadhan sare.
Isla markiiba waa muhiim in la ogaado in mulching ee ciidda agagaarka warshad waa in la sameeyaa oo kaliya isla markiiba ka dib markii laga beerto. Mustaqbalka, habka noocan oo kale ah lagama maarmaan iyo waxaa lagu fuliyaa oo kaliya gobollada leh dhaxan jiilaalka xoog leh.
Si kastaba ha ahaatee, waraabinta joogtada ah ayaa ah tallaabo muhiim ah oo lagu daryeelayo warshad dhalinyaro ah. Xilliga kulul, geed waa in la waraabiyaa 7-10 maalmood oo kasta. Under geedka ku shub 20-30 litir oo biyo diirran. Xilliga dayrta iyo guga, tirada biyuhu waa in la yareeyaa, haddii kale khatarta cudurada fangas ayaa si weyn u kordhaya. Dhowr saacadood ka dib waraabinta culus oo u baahan in la sameeyo fiidkii ama aroortii, ciidda agagaarka geedka waa in lagu dhajiyaa. Hannaankani wuxuu gacan ka geysan doonaa isbadal hawo oo ka fiican carrada. Inta lagu guda jiro habsocodka dabacsanaanta, waxaad si siman u gali kartaa jaridda dhirta, haddii loo baahdo carrada. Waabaa agagaarka dhirta waa in si joogto ah looga saaraa, maaddaama ay ka qaadaan ciidda nafaqooyin badan oo geedku u baahan yahay.
Ka hor intaanad bilaabin inaad nuugato nudahaaga, waxaad u baahan tahay inaad barato fikradda "aagga cuntada". Goobta nafaqada waa deegaan shaagaysan oo shuruudaysan, taas oo si siman u xaddidaysa astaamaha dhirta; aag la siiyo waa in lagu daaweeyaa mid ama bacrimin kale muddo cayiman. Tusaale ahaan, warshad dhalinyaro ah (illaa 4 sano jir) waxay leedahay meel cunto ah oo ah 5 m². Tani waxay ka dhigan tahay in goobo (xarun ay tahay godka) oo leh illaa 125 cm (waxaad dib u cusbooneysiin kartaa sida ku cad foomka caadiga ah ee wareegga wareegga) waa in lagu daaweeyaa Bacriminta dareeraha ah. Taasi waa, xalka aqueous ee Bacriminta qaarkood ayaa la sameeyaa oo si siman loo qaybiyo guud ahaan wareegga wareegga. Waa in la ogaadaa in aagga nafaqada dhirta laga bilaabo 4 ilaa 8 sano ay ku kala duwan yihiin gobolka 9-12 m² (wareegga wareegga waa 170-195 sm). Dhirta da'doodu ka weyntahay 8 sano waxay leedahay cunto cunno ah ilaa 20 m² iyo ka badan.
Waa muhiim! Qodob ka mid ah walxaha raadraaca nitrogenous ee ciidda waxay keeni doontaa in ay ka sii daraysa heerka guud ee fruiting.
Si sax ah u sax ah bacariminta isteroberi "Permyachka" waa inuu noqdaa mid nidaamsan:
Guga, marka dhaxan habeenkii oo gebi ahaanba baxo, ciidda ku wareegsan geedka waa in la furo. Isla markiiba ka dib, Bacriminta organic waa in la isticmaalo: digada, peat, compost, humus, iwm.
Xilliga xagaaga iyo dayrta, geedka waa in lagu quudiyo kakoobka / fosfooraska / nitrogen ee qiyaasta 4: 1: 3. Dhismayaasha macdanta noocan oo kale ah ayaa laga iibsan karaa dukaanka beerta. Badanaa dharka macdanta ayaa lagu qasi karaa biyo waxaana si siman loogu dabaqay dhammaan qaybta nafaqada ee geedaha pear.
Wixii fruiting fiican iyo inta lagu jiro muddada ugxan miro, geed ayaa lagu quudin karaa leh arrinta organic. Quudinta waxaa sidoo kale lagu sameeyaa qeybta dhan ee nafaqada. Qodobka ugu muhiimsan ee kiiskan wuxuu noqon doonaa mullein ama slurry. Qayb kasta oo ka mid ah qaybahan waa in lagu kala diraa biyaha marka la eegayo heerka 1: 5 (1 qaybood oo ka mid ah arrinta organic 5 qaybood oo biyo ah).
Ka dib dhamaadka ubax, waa wax aan la aqbali karin in lagu quudiyo Bacriminta nitrogen, laakiin potash iyo Bacriminta fosfate waa lagama maarmaan (for fruiting wanaagsan).
Xusuusnow in bacarimistu ay noqoto mid nidaamsan oo sax ah marka loo eego qiyaasaha. Daraasad ku jirta ciidda macro / nafaqeeyayaal yar ayaa u horseedi kara cudurrada geedaha iyo hoos u dhaca heerkulka guud ee fruiting.
Noocyo ku'saabsan "Permyachka" si aad u fiican jawaabta guga iyo gaajo. Laakiin muhiim maaha in la gooyo caleemaha iyo laamo dhirbaaxo leh, kobaca firfircoonida jihada aan loo baahnayn waxay dardar gelin kartaa dhawr jeer. Badanaa, kaliya caleemaha ayaa la saaraa kuwaas oo loogu talagalay bartamaha taajka ama farageliyo koritaanka dhirta dhaadheer.
Inta lagu guda jiro habka khafiifinta, laamaha qulqulka ee ugu horreeya iyo kan labaad ayaa la gaabiyaa 1/5 dhererka. On jirridda oo kaliya caleemaha waxaa laga saaraa in fara galin ah ee formation of qaabka dheer ee taajka. Geedaha da'doodu ka weyn tahay 6-7 sano ayaa la gooyaa 1-2 sano kasta. Halkii, waxay noqon doontaa manjooyin dib u rejeynaya. In ay geedi socodka waa lagama maarmaan in la saaro dhammaan laamood qalalan iyo waxyeello, iyo sidoo kale caleemaha kuwaas oo ka hor istaagaya koritaanka ee saqaf waaweyn fruitful. Ka dib marka la gooyo boogta, waa lagama maarmaan in lagu daboolo dhoobo si aysan jirradu u dhicin geedka.
Si aad uga cabsiisid furaha jiirka ee jiilaalka xilliga jiilaalka, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah waqtigaa. Mid ka mid ah hababka ilaalinta ayaa ku dhejisanaya jirridda warshadda ilaa laanta koowaad ee leh qallajiye, xoqan maskaxeed, iwm. Intaas waxaa dheer, maanta waxaa jira walxo kiimikaad badan oo awood u leh inay jilciyaan jiirka. Waxaad ka iibsan kartaa agabyada noocan ah ee ku dhowaad xarun kasta oo beerta waaweyn. Laga bilaabo diyaarinta geedka jiilaalka waa inay ahaataa laga bilaabo Oktoobar. Marka hore dhammaan miraha mummified waa la saaraa, ka dibna caleemaha dhacday ayaa la ururiyaa oo wax walbana waa la gubay. Taas ka dib, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo waraabinta biyaha waraabka (gaar ahaan haddii xagaaga uu ahaa mid qalalan oo aan roob lahayn). Biyaha warshadaynta biyaha ayaa macnaheedu yahay in geedku uu xidid kuugu jiro biyo badan (laga bilaabo 500 ilaa 1000 litir).
Isla markiiba ka dib markii biyo badan oo bacrin ah, ciidda waa in la mulched leh peat, balka, humus, caws engegan, iwm. Lakabka mulch wuxuu ilaalin doonaa nidaamka xididka geedka inta lagu jiro xilliga qaboobaha xooggan ee qaboobaha.
Ma taqaanaa? Ka hor inta muuqaalka tubaakada ee Europe, caleemaha pear ayaa la cabbay.
Intaa waxaa dheer, jir iyo lafyarta hoose ee qalfoofka waa in lagu duuduubaa wax aan la taaban karin taas oo lagu dhejiyo lapnik. Hadda geed ayaa laga ilaaliyaa heerkulka jiilaalka yaryar, laakiin haddii qadar badan oo baraf ah ku dhaco jiilaalka, baraf weyn "koofiyad" ayaa u baahan doona in lagu diyaariyo agagaarka geedka. Pear "Permyachka" ayaa leh iska caabin ah baraf sare, sidaas darteed iyada waa jecel yihiin bannaanka u badan ee qaybta dhexe ee Russia. Intaa waxaa dheer, miraha ay yihiin mid aad u dhadhan fiican leh iyo casiir leh, iyo sidoo kale universal in isticmaalka cuntada. Kormeeridda dhammaan xeerarka daryeelka xanaanada, waxaad sanad walba qaadan kartaa qadar badan oo ah dalag tayo sare leh.